Ukurhweba ngekamva kwiNkxaso ephezulu! Ngokupheleleyo ngoJanuwari 2022 Funda isiKhokelo soRhwebo esi-2
Funda ngesiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2021 kwishishini elizayo!
Urhwebo lwexesha elizayo likuvumela ukuba uqikelele kwixabiso 'lexa elizayo' le-asethi efana negolide, ioyile, igesi, isitokhwe, ii-indices, okanye ii-cryptocurrensets- ngaphandle kokuthatha ubunini obupheleleyo. Injongo ephambili kukuqikelela ukuba ucinga ukuba ixabiso le-asethi liza kuba phezulu okanye liphantsi kunexabiso lesiteleka elibekwe ziimarike.
Ngokungafaniyo nokukhetha, umnini wesivumelwano sexesha elizayo unembopheleleko yokuthenga iasethi esezantsi xa iphela. Oku kuhlala iinyanga ezintathu, nangona kunokuba mfutshane okanye ngaphezulu kunokuxhomekeka kwintengiso ethile. Unako, nangona kunjalo, ukhuphele izivumelwano zakho zekamva ngaphambi komhla wokuphelelwa, ekuvumela ukuba ufumane imali kwiinzuzo zakho.
Kwisikhokelo sethu sokuFunda soRhwebo esiyi-2 kuRhwebo lwexesha elizayo, sichaza ii-ins kunye nokuphuma kwendlela esebenza ngayo le nto. Siphinda sivavanye ukuba zeziphi ezinye iindlela ezikhoyo kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi kubatyali zimali zemihla ngemihla.
Qaphela: Iikontraki zexesha elizayo zemveli zigcinelwa isithuba esineenjongo- hayi ubuncinci kuba ubuncinci bobukhulu beqashiso bahlala be-6 okanye ama-7 amanani. Kananjalo, kuya kufuneka ujonge ikamva leCFD njengomrhwebi wentengiso.
Ngamafutshane, ikamva sisiphumo esiphucukileyo semali esivumela ukuba uqikelele kwixabiso leasethi elizayo. Oku kunokuba nayiphi na into evela kwi-index ye-stock market njenge-S & P 500 okanye i-FTSE 100, kwizinto ezifana nazo ngqolowa, ioyile, igesi, okanye igolide. Ukurhweba ngekamva elizayo kunenjongo ezimbini ezithile.
Okokuqala, zinokusetyenziswa njengesixhobo sokuqikelela ukwenza inzuzo kwixabiso elizayo lesixhobo semali. Oku kusebenza ngokufanayo nayo nayiphi na imveliso yotyalo-mali kwiimarike zezemali. Ngenye indlela, ikamva linokusetyenziselwa abavelisi abakhulu, amafama, okanye abasasazi ukutshixela kwixabiso leasethi ababandakanyeka kuyo.
Umzekelo, ukuba ixabiso leoyile ngoku lirekhodiweyo, inkampani yeenqwelo moya inokuthi ithathe isigqibo sokuthenga izivumelwano zekamva ngokuchasene nokunyuka ngequbuliso. Ngokwezinto ezithile, iikhontrakthi zexesha elizayo ziya kuhlala zinomhla wokuphelelwa- okuphakathi kweenyanga ezintathu.
Inzuzo kunye nelahleko yakho iya kumiselwa lixabiso lentengiso le-asethi xa isivumelwano sexesha elizayo siphela. Ngamanye amagama, kuya kufuneka uphindaphinda umahluko phakathi kokuthenga kunye nexabiso lesitrayikhi ngokuchasene nenani lezivumelwano ozibambayo. Kwezinye iimeko, unokuthatha isigqibo sokurhweba ikhontrakthi yakho yexesha elizayo ngaphambi kokuba iphele, ngentengiso isekwe kwixabiso lentengiso langoku leasethi.
Iinkonzo kunye neengozi zeNtengiso yexesha elizayo
Iikontrakthi zexesha elizayo zinokuthengwa zithengiswe ngokuchasene nayo nayiphi na iklasi yeasethi
Ikuvumela ukuba uqikelele ukuba ucinga ukuba i-asethi iya kunyuka okanye yehle kwixabiso kwixa elizayo
Rhoqo kufuneka ubeke iqhezu elincinci lexabiso lokurhweba lilonke njengediphozithi
Ungaphuma kwindawo yakho ngaphambi kokuphela kwexesha elizayo
Iluncedo kakhulu ekuzinqobeni ngokuchasene nokunyuka ngequbuliso okanye ukuncipha kwempahla onomdla kuyo
Ixesha elizayo lilungele kuphela abathengi beziko
Ziyinkimbinkimbi ngakumbi kuneempahla zendabuko
Ukuqonda urhwebo lwexesha elizayo - iziseko
Ukurhweba ngekamva kusenokuba yindawo yokulwa enzima kubatyali zimali abatsha, ke kubalulekile ukuba sizidilize iinkcukacha ezisisiseko. Ngaphambi kokuba senze, makhe sijonge kumzekelo osisiseko sokucoca inkungu.
Umzekelo woRhwebo lwexesha elizayo
Masicinge ukuba ucinga ukuba i-oyile inexabiso eliphantsi kwi-20 yeedola ngomgqomo. Uyakholelwa ukuba kwiiveki okanye kwiinyanga ezizayo, ixabiso liya kunyuka ngaphezulu kwe- $ 30. Ngenxa yoko, uthatha isigqibo sokuthenga ezinye iikhontrakthi zexesha elizayo.
Ikhontrakthi yekamva liphelelwe liinyanga ezintathu
Ixabiso lokuphela kwekhontrakthi nganye yi- $ 27
Ugqiba ekubeni uthenge iikhontrakthi ezili-100
Xa ikamva lesivumelwano liphela kwiinyanga ezintathu, ixabiso leoyile liyi- $ 40 ngomgqomo
Oku kusebenza kwi $ 13 ngomgqomo eliphezulu ngaphezu kwexabiso lesivumelwano se- $ 27, ke wenze inzuzo
Lilonke, uneekhontrakthi ezili-100 ngoko ke wenza inani elipheleleyo leedola ezili-1,300 kolu rhwebo luzayo (100 x $ 13)
Njengoko ubona koku kungasentla, inzuzo yethu ibisekwe kumahluko phakathi kwexabiso lesivumelwano ($ 27) kunye nexabiso lentengiso lokwenyani xa iikhontrakthi ziphelelwe lixesha ($ 40). Ukuba urhwebo luhambe ngenye indlela-oko kuthetha ukuba ixabiso ligqibe i-13 yeedola ezantsi, ngesenze i ukulahlekelwa $ 1,300 (100 x - $ 13).
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuya kuhlala kukho umahluko phakathi kwexabiso lekontrakthi yexesha elizayo, ngokuchasene nexabiso lentengiso yangoku. Umzekelo, kwicandelo elingentla siqaphele ukuba ixabiso 'le-oli' yangoku yayiyi- $ 20, kodwa ikhontrakthi yexesha elizayo yeenyanga ezi-3 yayixabisa ama- $ 27.
Ngokubalulekileyo, oku kungenxa yokuba iimakethi ziya kumisela ukuba leliphi ixabiso le-asethi elinokubakho-ngokusekwe kuluhlu lweenguqu kunye neemeko.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ixabiso lekhontrakthi yexesha elizayo leenyanga ezintathu liya kwahluka kuleyo yekhontrakthi emfutshane okanye ende. Ukuncamathela kumzekelo ofanayo weoyile ekrwada, ikhontrakthi yenyanga e-3 inokuba nexabiso lokuphelelwa li- $ 1, ngelixa ikhontrakthi yeenyanga ezili-22 inokuba ngaphezulu kakhulu kwi- $ 12.
Nje ukuba uvavanye ixabiso lokuphelelwa lixesha lekontrakthi, kuyakufuneka uthathe isigqibo sokuba ucinga ukuba zizakuhamba ngantoni iimarike. Oku kuyakufuneka ukuba ubude obude okanye omfutshane. Abanye abathengisi, oku kuchongwa njengokuthenga kunye nokuthengisa iodolo, ngokulandelelana.
Ke, ukuba ucinga ukuba ixabiso le-asethi liya kuba phezulu kunelo lekontrakthi yexesha elizayo, uya kuba uhamba ixesha elide. Ukuba ucinga ukuba iasethi iyakuphela isezantsi, uya kufutshane. Le yenye yezona zinto ziluncedo olukhulu kurhwebo lwexesha elizayo, njengoko iiasethi zemveli zikuvumela ukuba uqikelele kwixabiso elinyukayo.
Kwimeko yexesha elizayo ngokwesiko, uninzi lwezivumelwano ziya kuba nexesha lokuphela kweenyanga ezi-3. Ngokwendlela ye- ethile umhla, oku kuhlala kungoLwesihlanu wokugqibela kwinyanga nganye. Ngale nto ithethwayo, kunokwenzeka ukuba uthenge ikhontrakthi emfutshane okanye ende - ephantsi kweziko lezemali elidala intengiso.
Ukuvala urhwebo lwexesha elizayo ngaphambi kokuphela kwexesha
Nangona iikhontrakthi zexesha elizayo ziya kuhlala zinomhla wokuphelelwa, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba awunyanzelekanga ukuba ugcine isikhundla sivulekile ngalo lonke ixesha laso. Ngokuchasene noko, unokuvala indawo yokurhweba kwikamva naxa ubona kufanelekile.
Oku kusebenza ngokufanayo nasiphi na esinye isixhobo sezezimali - kude kubekho isidingo sokuba kubekho umthengi ozimisele ukuthenga ikhontrakthi yexesha elizayo kuwe. Lo ayifanelanga ukuba ngumba xa kuthengiswa iiklasi zeasethi ezinjengeoyile, igolide, okanye iimali- njengoko indawo yokurhweba kwikamva ilikhaya lezigidi zeedola ezixabisa yonke imihla.
Ngokwamaxabiso, ixabiso lentengiso yekontrakthi yakho liya kuxhomekeka kwimeko zentengiso ezikhoyo.
Masicinge ukuba uya kufutshane kwisivumelwano segesi yendalo enomhla wokuphela kweenyanga ezi-3
Ixabiso lekhontrakthi laliyi- $ 2 nge-MMBtu nganye
Kwiinyanga ezimbini kwisivumelwano, ixabiso legesi yendalo li- $ 1.50.
Uthatha isigqibo sokutshixa kwiingeniso zakho kwi- $ 0.50 ngesivumelwano ngasinye, esixabisa kwiinzuzo ezingama-25%
Njengokungasentla, 'ubusemalini' kurhwebo lwakho lwexesha elizayo inyanga enye ukusindisa. Ngokuqinisekileyo, ubunokugcina indawo ivulekile de kube ziphelile iikhontrakthi- kwaye unokuba wenze nangakumbi. Kodwa, endaweni yoko uthathe isigqibo sokutshixa ngaphakathi kwiingeniso zakho kwaye wenze ukubuya okuqinisekileyo kwe-25%.
Kwiimarike zoRhwebo lwexesha elizayo
Xa kuziwa kwiimarike onokuzithenga kwaye uthengise iikontrakthi zexesha elizayo, amathuba anokuphela. Ngamanye amagama, ukuba indawo yentengiso ikhona, konke kuqinisekile ukuba ikontrakthi yexesha elizayo inokuthengwa. Nangona kunjalo-kwaye njengoko sixoxa nzulu nzulu ezantsi, imeko yekamva lesiko ligcinelwe abathengi bezinga elikhulu, ke kuya kufuneka uthengise ii-CFD endaweni yoko.
Nangona kunjalo, ezinye zeentengiso eziqhelekileyo zorhwebo zidweliswe apha ngezantsi.
Ama Indices: Oku kubandakanya zonke ii-indices zentengiso ezinkulu kunye nezinye. Cinga ngemigca ye-S & P 500, Dow Jones, FTSE 100, kunye neNikkei 225.
Amasheya: Kuyenzeka ukuba urhwebe iikhontrakthi zexa elizayo kwizabelo zamasiko afana neApple, Facebook neDisney.
Iintsimbi ezinzima: Izinto ezifana negolide, isilivere, kunye nobhedu zithandwa kakhulu kwindawo yokurhweba kwikamva. Oku kuvumela abatyali mali ukuba bafumane ukubonwa kwezinto ezinokubanzima ukufikelela kuzo.
Amandla: Oku kubandakanya iimarike eziphambili zeoyile ekrwada kunye negesi yendalo.
Iimveliso zezolimo: Unokuthenga kwaye uthengise iikhontrakthi zexesha elizayo kwiimveliso zezolimo ezinjengengqolowa, umbona kunye neswekile. Eli candelo liyathandwa ngabalimi abanqwenela ukuzikhusela ngokuchasene nokunyuka kwamaxabiso asethi ababandakanyekayo kuyo.
Ngaba kufuneka ndihambise uMzimba?
Omnye wemibuzo oqhelekileyo abathengisi be-newbie bexesha elizayo bayabuza yile yokuhanjiswa komzimba. Umzekelo, ukuba uthenga iikhontrakthi ezili-1,000 kwioyile ekrwada kwaye uvumela ikhontrakthi iphele, ngaba kuya kufuneka uthathe ukuhanjiswa ngokwasemzimbeni kwemigqomo eyiyo?
Ewe, konke oku kuxhomekeke kwindlela ikontrakthi yexesha elizayo ehlawulwa ngayo.
Kwiimeko ezininzi, ikontrakthi yexesha elizayo iya kuhlawulwa ngemali ezinkozo. Umzekelo, masicinge ukuba unezivumelwano ezinde zegolide. Oku kuthetha ukuba uyavuma ukuthenga igolide kamva. Nangona kunjalo, ukuba ungavumela ikamva legolide liphele, kuya kufuneka uhlawule ngekamva imali.
Oku kusekwe kwixabiso lesitrayikhi lekontrakthi yekamva, kwaye hayi Ixabiso langoku lemarike. Inqaku eliphambili apha kukuba imeko yokurhweba kwikamva ilawulwa ngabatyali zimali abacingelayo abangenamdla wokuziswa kwempahla. Ngokuchasene noko, bajonge nje ukwenza inzuzo ngumahluko phakathi kwexabiso lesivumelwano kunye nexabiso lokuhlawula.
Ngale nto ithethwayo, ezinye iikhontrakthi zexesha elizayo zihleliwe kwiasethi esezantsi, ngokuchasene nemali. Oku kwabonakala ngo-Epreli 2020 xa ixabiso lekamva leoyile le-WTI lihamba ezimbi.
Isizathu soku kukuba bekukho ioyile eninzi kakhulu ekusasazeni. Ngokwe-coronavirus bhubhane, imfuno yeoyile yayingekho, oko kuthetha ukuba abo babambe iikhontrakthi ezizinzileyo ngokwasemzimbeni babengenandawo bayigcina khona.
Ngenxa yoko, abarhwebi babenethemba lokukhuphela umthwalo wabo kwizivumelwano zokuphepha ukuthintela uxanduva lokuhambisa ngokwasemzimbeni. Kwelinye icala, oku kwatyhala amaxabiso exesha elizayo kwindawo engeyiyo. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba uya kuba imali ukuthatha ukuhanjiswa kwemiphanda, akukho nto imfutshane kunangaphambili!
Ngelixa okuninzi kweli phepha kugxile kwicala lokuqikelela lokurhweba ngekamva, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le nto ilungele uthango. Kwiimeko ezininzi, le iya kuba ngumvelisi wokwenyani weasethi ejonge ukuzikhusela ekwehleni ngesiquphe kwexabiso.
Emva kwayo yonke loo nto, iiasethi ezinjengeoyile, ingqolowa, umbona, iinkozo, kunye neswekile zilawulwa kukubonelelwa kunye nemfuno. Ukuba kuninzi ukubonelelwa kwaye akukho bango laneleyo, ixabiso le-asethi liya kuthi lonke kodwa ngokuqinisekileyo lihle. Oku kuyakuba nefuthe ngqo kubavelisi, njengoko kuya kufuneka bathengise iiasethi ngexabiso eliphantsi. Kananjalo, banokunyanzelwa ukuba bavelise iiasethi ngelahleko.
Ngale nto ithethwayo, iikhontrakthi zexesha elizayo zivumela abavelisi ukuba banciphise isoyikiso semida encitshisiweyo, njengoko banokutshixela kwixabiso lokuphelelwa lixesha elinikezelwa yimakethi.
Makhe sijonge umzekelo wokucoca inkungu:
Masicinge ukuba ixabiso lombona ngoku liphezulu kwiminyaka emi-4
Oku kuluncedo kakhulu. kubavelisi bombona, njengoko benokuthengisa imveliso yabo ngexabiso eliphezulu. Emva koko, banokugqiba ekubeni bathathe abasebenzi abaninzi kwaye emva koko bandise amanqanaba emveliso
Ukuqonda ukuba ixabiso lombona linokuhla nangaliphi na ixesha, umlimi uthatha isigqibo sokunqumlela kwisivumelwano sexesha elizayo nokuphela kweenyanga ezili-12.
Kulapho, sinye kuphela kwiziphumo ezibini ezinokwenzeka
Okokuqala, ukuba ixabiso lentengiso yombona liyehla, umlimi kuya kufuneka athengise imveliso yakhe ngexabiso eliphantsi. Kodwa, baya kwenza imali kwikontrakthi yexesha elizayo abaye bahamba ngayo
Kungenjalo, ukuba ixabiso lentengiso yombona liyaqhubeka nokunyuka, umlimi uya kuba nakho ukuthengisa imveliso yakhe ngexabiso eliphezulu nangaphezulu. Kodwa, baya kuphulukana nemali kwikhontrakthi yekamva abalifinyezileyo.
Ekugqibeleni, lo mzekelo ungasentla ucacisa ukuba nokuba kwenzeka ntoni kwixabiso lombona kwiinyanga ezili-12 ezizayo, umfama uya kuba nakho ukuzivalela ngexabiso langoku. Kuya kubakho, ewe, iirhafu ekufuneka zithathelwe ingqalelo.
Ukurhweba ngekamva kunye nokukhetha
Kuhlala kukho ukungaqondi ukuba ikamva kunye neenketho ziyafana. Kwelinye icala, zombini izixhobo zemali zikuvumela ukuba uqikelele kwixabiso elizayo le-asethi. Ngokufanayo, zombini ziyakuvumela ukuba uhambe ixesha elide okanye elifutshane. Nangona kunjalo, umahluko ophambili ubeka kwisibophelelo sokuthenga iasethi esezantsi ukuphela.
Kwimeko yokhetho, umtyali-mali unelungelo, kodwa hayi uxanduva lokuthenga i-asethi yakuba ikhontrakthi iphelile. Endaweni yoko, bafuna ukuhlawula ipremiyamu ngaphambili, abaya kuphulukana nayo ukuba bakhetha ukungathengi.
Xa kuziwa kurhwebo lwexesha elizayo, abatyali mali 'kufuneka' bathenge ikhontrakthi engaphantsi kokuphelelwa lixesha. Oku kuyakusekelwa kwixabiso lekontrakthi yexesha elizayo, kunye nenani lezivumelwano ozithengileyo. Nokuba wenze inzuzo okanye awuzukuyenza iya kuxhomekeka kwixabiso lokuvala le-asethi xa iikhontrakthi ziphelile!
Kutheni ukuThengisa kwexesha elizayo kunzima kubathengi beRetail
Njengoko siqaphele kwisikhokelo sethu, ishishini lokurhweba kwikamva lihlala lilawulwa yimali yeziko. Kungenxa yokuba kufuneka udibane nobuncinci besayizi yeqashiso, edla ngokuba ngamanani ayi-6 okanye asi-7. Umzekelo, ukuba ufuna ukufikelela kwimarike yeBitcoin yexesha elizayo kwi-CME, kuya kufuneka uthenge iikhontrakthi ezi-5.
Ikhontrakthi nganye ixabisa i-5 Bitcoin, ithathe ubuncinci botyalo-mali kwi-25 Bitcoin. Ngexabiso langoku le- $ 9,000, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka utyale ubuncinci i-225,000 yeedola ukuze ujonge ngaphakathi. Nokuba ungafikelela kubuncinci, kuya kufuneka ubenendawo 'yotyalo mali'.
Oku kukodwa kufuna ubuncinci benethi eyi- $ 1 yezigidi, okanye umvuzo wonyaka ubuncinci obuyi- $ 200,000 kwiminyaka emibini edlulileyo. Ngale nto ithethwayo, uya kuba nzima kakhulu ukufikelela kwimakethi yokuthengisa yexesha elizayo ngaphandle kokuba uhlangabeze ezi ndlela zichazwe ngasentla.
Iindaba ezimnandi kuwe kukuba kukho indawo elula yokusebenza ngohlobo lweeCFD.
Ngamafutshane, ii-CFDs (iikhontrakthi-zomahluko) zikuvumela ukuba uqikelele ngexabiso elizayo le-asethi ngaphandle kokuba ungumnini wesixhobo. Endaweni yokuba urhwebo lwakho lusekwe ekubeni ucinga ukuba ixabiso le-asethi liza kunyuka okanye lihle kwixesha elizayo.
Njengoko i-asethi ekuthethwa ngayo ingekhoyo, ii-CFD zinokulandela ixabiso lehlabathi lokwenyani lamawaka ezixhobo zemali. Ngapha koko, ukuba indawo yentengiso ikhona-nokuba ibekelwe imali yeziko, ii-CFD zibonelela ngokufikelela.
Oku kuthetha ukuba unokurhweba ngokufana neeklasi zeeasethi eziza kulandela umkhondo weekhontrakthi. Nokuba isitokhwe sayo, ii-indices, amaxabiso enzala, igolide, ioyile, igesi, okanye ii-cryptocurrensets - Abarhwebi beCFD bayakuvumela ukuba uhambe ixesha elide kwaye mfutshane kwimpahla.
Awukho umhla wokuphelelwa
Enye yeenzuzo ezinkulu zokukhetha i-CFDs kwisivumelwano sexesha elizayo kukuba akukho mhla wokuphelelwa kwesivumelwano. Ngokuchasene noko, ii-CFD zihlala zisebenza okoko unqwenela ukugcina indawo ivulekile. Oku kuthetha ukuba awunyanzelwanga ukuba uhlawule ikhontrakthi ngomhla othile, ke uya kuba nakho ukuvuma ukuvala indawo njengoko ubona kufanelekile.
Akukho Ubuncinci boLote
Ngelixa indawo yokurhweba ngekamva eliqhelekileyo ihlala ibeka ubuncinci besayizi engaphezulu kwamanani ama-6, oku akunjalo ngeeCFD. Ngapha koko, unokuhlala uthengisa ii-CFD nge-akhawunti eseleyo ye- $ 100 nje. Oku kufanelekile kwabo bafuna ukufikelela kwiqonga elizayo, kodwa awufuni ukubeka emngciphekweni isixa esikhulu semali.
Urhwebo lwexesha elizayo ngohlobo lwee-CFDs likuvumela ukuba ufake isicelo. Yilapho uza kuthengisa ngemali engaphezu kweyakho kwiakhawunti yakho. Umzekelo, masithi uthatha isigqibo sokuhamba ixesha elide kwioyile.
Uqinisekile ngokuqikelela kwakho, ke uthatha isigqibo sokusebenzisa i-10x. Kwibhalansi yeakhawunti eyi- $ 200, oku kuthetha ukuba ixabiso lorhwebo lwakho yi- $ 2,000. Nayiphi na inzuzo (okanye ilahleko) oyenzayo iya kuthi iphindaphindwe nge-10.
Uluqala njani urhwebo lwexesha elizayo
Ukuba uyasithanda isandi sorhwebo lwexesha elizayo kwaye unqwenela ukuqalisa ngeakhawunti yotyalo-mali namhlanje, ngoku siza kukubonisa amanyathelo ekufuneka uwathabathile.
Inyathelo 1: Khetha indawo yokuthengisa ye-CFD yexesha elizayo
Njengoko siphawulile kwicandelo elingentla, kuyakufuneka uthengise ikamva leCFD njengomthengi wentengiso. Kananjalo, izibuko lakho lokuqala lokufowuna iya kuba kukufumana umrhwebi okwi-intanethi ohlangabezana neemfuno zakho.
Ezinye zezinto ekufuneka uzijongile ngaphambi kokuba ubhalise zezi:
Ummiselo: Kuya kufuneka usebenzise kuphela umthengisi wexesha elizayo weCFD ukuba ulawulwa ngumzimba onelayisensi yomntu omnye. Oku kubandakanya ukuthanda izinto ze FCA (UK), iCySEC (iSipro), iMAS (iSingapore), okanye ASIC (Ostreliya).
Iimpahla eziQhelekileyo: Chitha ixesha ujonga indawo yokurhweba kwi umrhwebi ukubona ukuba yeyiphi impahla onokuyithenga uyithengise. Iiklasi zeeasethi ezidumileyo onokuzithengisa ngekamva le-CFD zizinto, ii-indices kunye neestokhwe.
Izindlela zokuhlawula: Uya kuthengisa ikamva le-CFD ngemali-yokwenyani yehlabathi, ke qiniseka ukuba umrhwebi uyayixhasa indlela oyithandayo yokuhlawula. Eyona ndlela ilula yokufumana imali kwiqonga lokurhweba nge-debit okanye kwikhadi letyala.
Imirhumo kunye neKhomishini: Uya kuhlala uhlawula umrhumo xa uthengisa ikamva le-CFD, ke qiniseka ukuvavanya ubume bamaxabiso omthengisi ngaphambi kokuba ubhalise.
Uxhaso lwabathengi: Okokugqibela, jonga ukuba zeziphi iindlela zokuxhasa ezixhaswayo (ezinje ngengxoxo ebukhoma) kwaye leliphi iiyure elisebenza ngalo iqela labathengi.
Ukuba awunalo ixesha lokuphanda umrhwebi ngokwakho, sidwelise amaqonga ethu aphezulu amahlanu e-CFD kwikamva lokuphela kweli phepha.
Inyathelo 2: Vula iAkhawunti kwaye ufake iSazisi
Njengoko uza kusebenzisa iqonga lotyalo-mali elilawulwayo, umrhwebi kuya kufuneka ngokusemthethweni ukuba aqinisekise isazisi sakho.
Ukwenza ibhola irola, vula iakhawunti ngokufaka olu lwazi lulandelayo:
Uya kuthi emva koko ucelwe ukuba ulayishe ifom yesazisi. Le inokuba yipasipoti, iphepha-mvume lokuqhuba, okanye ikhadi lesazisi elikhutshwe ngurhulumente.
Inyathelo lesi-3: Fundisa iAkhawunti yakho yoRhwebo lweKamva
Uyakufuna ngoku ukufaka imali kwiakhawunti yakho yomrhwebi yeCFD.
Iindlela zokuhlawula ngenkxaso zibandakanya:
Inyathelo 4: Beka uRhwebo
Nje ukuba idiphozithi yakho ifakwe kwikhredithi- edla ngokuba yeyokukhawuleza, ungabeka urhwebo lwakho lokuqala lweCFD.
Khangela iasethi onqwenela ukuyithengisa (ioyile, igolide, ingqolowa, njl.
Uthathe isigqibo sokuba uyafuna ukuhamba ixesha elide (thenga iodolo) okanye mfutshane (thengisa iodolo)
Ngena kwisibonda sakho
Ukuba kufanelekile-chaza inani lemilinganiselo onqwenela ukuyisebenzisa
Cwangcisa ioyile yokuyeka
Cwangcisa iodolo yenzuzo
Ngokungafaniyo nekhontrakthi yesiko lekamva, iiCFD aziphelelwa. Oku kuthetha ukuba ungaphuma kwindawo yakho nanini na ufuna. Ukuba uvule nge-oda yokuthenga, vele ubeke i-odolo yokuthengisa ukuze uvale urhwebo- kunye ne-visa-versa.
Iindawo eziGqwesileyo zeXesha elizayo ngo-2021
Awunalo ixesha lokuphanda ngomrhwebi ozayo? Ukuba kunjalo, apha ngezantsi uza kufumana i-brokers zethu ezintlanu ezikalwe kakuhle ze-2021.
Isishwankathelo, urhwebo lwexesha elizayo luyindlela elungileyo yokufumana ukubonwa kwezinto ezinzima njengegolide, ioyile, kunye nengqolowa- ngaphandle kokuba ufuna ukuthatha ubunini ngqo ngaphambili. Endaweni yoko, uya kuba ucinga ukuba ucinga ukuba ixabiso le-asethi liza kunyuka okanye lisezantsi xa ikhontrakthi iphela.
Ngale nto ithethwayo, indawo yokurhweba ngekamva lesiko ihlala ifumaneka kuphela kwimali yeziko. Kungenxa yokuba ubuncinci bobukhulu beqashiso bahlala ngaphezulu kwe- $ 100,000. Kananjalo, olona khetho lwakho lulungileyo kukurhweba ngekamva ngeCFDs.
Ukuba unomdla wokuqalisa namhlanje, singacebisa ukuba kusetyenziswe omnye wabarhwebi abakhe baphononongwa ngaphambili esixoxe ngeli phepha.
Zeziphi iimarike eziza kulandela ikontrakthi yexesha elizayo?
Iikontrakthi zexesha elizayo zinokulandela umkhondo phantse kuyo nayiphi na iklasi onokucinga ngayo - okoko nje kukho indawo yentengiso yokwenene.
Inzuzo ibalwa njani kwi-future tradg?
Inzuzo yakho isekwe kumahluko phakathi kwexabiso lekontrakthi yexesha elizayo, kwaye leyo yeasethi iyalandelela xa ikhontrakthi iphela. Umzekelo, ukuba uthenge ikamva kwioyile nge-25 yeedola emva koko wathengisa ikhontrakthi xa ioyile ithengiswe ngexabiso elingama-40 eedola, uza kwenza i- $ 15 ngesivumelwano. Emva koko kuya kufuneka uphindaphinde inzuzo yakho eyi-15 ngenani lezivumelwano ozibambayo.
Ngaba unako ukurhweba ngekamva kunye namandla
Unako, kodwa kuyakufuneka uthengise kwikamva elimelwe ziiCFD.
Ngaba kufuneka ndithathe ukuhanjiswa ngokwasemzimbeni kweasethi xa ndirhweba ngekamva?
Kuphela xa utyale imali kwikhontrakthi yexesha elizayo ehlawulwe kwi-asethi ekulandelayo, ngokuchasene nemali. Ezi ntlobo zeekhontrakthi zexesha elizayo zihlala zithengwa kuphela abavelisi ye-asethi njengohlobo lokubiyela.
Lithini elona xabiso liphantsi lotyalo-mali xa uza kuthengisa ikamva?
Kwimeko yokuthengisa yexesha elizayo, ubuncinci bobukhulu beqashiso bahlala be-6 okanye ama-7 amanani. Kodwa, ukuba uthatha isigqibo sokurhweba ngekamva leCFD, unokuhlala urhweba ngebhalansi ye- $ 100 nje.
Ngubani ogqiba ngexabiso lesivumelwano sexesha elizayo?
Njengoninzi lweeklasi zeesile, ixabiso lesivumelwano sexesha elizayo limiselwa yimikhosi yentengiso.
Ngaba ndingarhweba ngekamva kwiBitcoin njengomthengi wentengiso?
Ukuba udweliswe njengomthengi wentengiso, ngekhe ukwazi ukufikelela kwimakethi ye-CME yexesha elizayo, njengoko oku kugcinelwe imali yeziko. Uya kuthi, nangona kunjalo, ube nakho ukurhweba nge-Bitcoin CFDs - ethi ngeenjongo, isebenze ngokufanayo nemarike yesiqhelo yekamva.